10 qodob oo sabab u ah in sanadkaan tartanka kursiga BF uu noqdo mid qabow - Caasimada Online
Home Warar 10 qodob oo sabab u ah in sanadkaan tartanka kursiga BF uu...
10 qodob oo sabab u ah in sanadkaan tartanka kursiga BF uu noqdo mid qabow
Asbuuc kadib is casilaadii Gudoomiyihii baarlamaanka Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaa la magacaabay Giddi qaban-qaabo oo la filayo in ay Asbuuc kale ku dhameeyaan howsha.
Waxaana Hoteelada Xamar ka socda olole iyo xod-xodasho lagu raadinayo bedelkii Gudoomiye Jawaari oo kursiga baneeyay 12 kii bishaan. Lkn ololaha sanadkan ayaa ka duwan kana qabow ololihii doorashooyinkii looga bartay Muqdisho 2012 & 2017. Sababahaan awgood:-
1-Xildhibaanada Xukuumadda Nabad & Nolol iyo Xildhibaanada Mucaaradka oo wada daalay kadib loolan siyaasadeed oo soo dhex maray sanad ka badan.
2-Murashixiinta Gudoomiyaha oo ku kooban hal beel, Curfiga siyaasada 4.5 oo aan ku qornayn Dastuurka, lkn la aaminay.
3-Murashaxiinta ugu cad cad oo noqday hal dhinac ama group oo ah kuwii keenay Mooshinkii Jawaari.
4-Xukuumadda oo go’aansatay in ay dhex-dhexaad ka noqoto kadib markii ay Musharraxiintii oo dhan ay noqdeen Wasiiro ka tirsan iyo Xildhibaanno taageersan.
5-Madaxwayne Shariif Xasan oo ka daalay in uu Gudoomiyaha ka bedelo beelaha koofur galbeed, kadib markii uu isku dayay laba doorasho oo hore.
6-Xildhibaanadii Mucaaradka ahaa ee taageersanaa Jawaari oo aan keensan Musharrax, kana daalay loolanka, kuna mashquulsan dhismaha Xizbiyo ay doorasho ku galaan 2020 ka.
7-Dawlad Gobaleedyada oo aan aad u danaynayn qofka uu noqonayo Gudoomiyaha Barlamaanku markii laga reebo koofur galbeed, culays haysta iyo doorashooyin kusoo dhaw awgeed.
8-Dawladaha iyo Ururada Shisheeye oo fara gelin-toodii arrimaha dalka ay yaraatay.
9-Dadka Somaaliyeed oo ka daalay lookanka iyo tartanka siyaasadda oo jecel xasilooni iyo deganaasho siyaasadeed.
10-Beelaha Shabeelada Hoose oo jecel in tookadaan iyaga la siiyo Gudoomiyaha, kadib markii ay u sabreen lana shaqeeyeen ilaa 5 Gudoomiye oo kasoo jeeda Bay & Bakool, iyaga oo tusaale ka dhiganayo s bedelkii sanadkii hore ee Kuraasta Madaxweynaha iyo R/wasaaraha.
Hadaba qodobadaas iyo kuwa kale ayaa ka dhigay tartanka kursiga Gudoomiyaha Barlamaanka mid Qabow sanadkaan.
Lkn Xildhibaanada ayaa hadal haya in ay helaan Gudoomiye; dhalin-yaro ah, fahmi kara dareenka iyo baahida dhalinyarada Barlamaanka oo gaaraya ilaa 70% , Gudoomiye Madax banaan oo aan koox laheen, leh aqoon, karti, hufnaan iyo waaya aragnimo ku filan, Midayn kara Xildhibaanada, ku hoggaamiya daacad-nimo 3 sano ee soo socota iwm.